ग्रेडिङको गह्रौं भारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
असार १०, २०७६ हरिहर तिमिल्सिना
एसईईको नतिजाको मौसम छ । अभिभावकले आफूले पूरा गर्न नसकेका सपना छोराछोरीको दिमागको ब्याडमा रोप्ने समय पनि यही हो । विद्यार्थीलाई विषय छान्ने र शिक्षालयलाई विद्यार्थी तान्ने मौका पनि यही हो । एघार कक्षामा भर्ना गराउन शिक्षा प्रदायकहरूबीच अघोषित भागदौड हुने समय पनि यही । भेल छोप्ने मौसम नै हो यो ।
बर्खे भेल छोपिएन भने टारीखेते किसानको रोपाइँ हुँदैन । एसईईको भेल छोपिएन भने एघार–बाह्र कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूको आर्थिक मुहान सुक्छ । यो उपक्रममा विद्यार्थीका सपना र भावनाको कदर भने खासै भएको पाइँदैन । हाम्रो मुलुकमा एसईई (एसएलसी) लामो समयसम्म त्रासदीको शृङ्खला बनेर आयो ।
अझै पनि त्यो पूर्णतः समाप्त भएको छैन । यसैको डर देखाएर स्कुलहरूले विद्यार्थी र अभिभावकको अतिरिक्त दोहन गरेकै हुन् । अझै पनि सबैको ध्यान एसईईको नतिजामै हुन्छ । स्कुल र पढाउने शिक्षकको मूल्याङ्कन यसैबाट हुन्छ । पढाएर, घोकाएर, थर्काएर, कोच्याएर जे गरेर भए पनि विद्यार्थीको राम्रो नतिजा ननिकाली सुखै छैन ।
ट्युसन र कोचिङको घोटीचौथी पनि राम्रै बिक्ने गरेको छ । पहिलापहिला नतिजा निस्किएपछि स्कुलहरूलाई सोधिने प्रश्न हुन्थ्यो— प्रथम श्रेणी कति जनाको आयो ? त्यसपछि विशिष्ट श्रेणीको याम आयो । अहिले ए प्लसको जगजगी छ ।
ए प्लसको अड्को
ए प्लस ल्याउने सबै विद्यार्थी राम्रा हुन्छन् भन्ने होइन । असफलताको बिल्ला भिर्न बाध्य सबै विद्यार्थी नराम्रा पनि हुँदैनन् । निजी स्कुलमा पढेका र सहरी क्षेत्रको पहुँच पुगेका कतिपय विद्यार्थी ए प्लस ल्याउन सफल ह्न्छुन् ।
तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेका छन्— ए प्लसको भागीदार हुने सरकारी/सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ । सन्ततिको ए प्लस र ए आउनेबित्तिकै केही अभिभावकमा एकखाले भ्रम उत्पन्न हुने गरेको छ ।
राम्रो ग्रेड ल्याउनु आफैँमा नराम्रो होइन । माथिल्ला ग्रेड आउँदैमा गाह्रो विषय पढाउनुपर्छ भनेर सोच्नुचाहिँ नराम्रो हो । अहिले हाम्रो शिक्षा बजारमा एसईईपछि विद्यार्थीले रोज्ने मुख्य पाँच क्षेत्र छन्— विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र केही व्यावसायिक विषय ।
ए प्लस आउने अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ बुझेर हो या नबुझेर, विज्ञान नै हुने गरेको छ । कतिपय विद्यार्थी अभिभावक र आफन्तको दबाब र करबलले विज्ञान पढिरहेका हुन्छन् । ए प्लस लगायत राम्रो ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले अरू विषय पढ्न खोजे भने अभिभावक र आफन्तको टिप्पणी हुने गर्छ— ‘ए प्लस ल्याएर पनि किन साइन्स नपढेको ?’
ए र ए प्लस ल्याएर बिग्रिएका धेरै विद्यार्थी मैले भेटेको छु । राम्रो जीपीएको भारीले तिनीहरू यसरी थिचिएका छन्, जिन्दगीमा फेरि उठेर अघि बढ्न तिनलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कतिले ११–१२ पढ्दापढ्दै बीचैमा छोडेका छन् । कति जसोतसो ११–१२ सकेर स्नातक पढ्ने बेला सजिलो विषयतिर फर्केका छन् ।
कतिले एकदुई महिना पढेपछि अभिभावकलाई रोई–कराई मनाएर विषय फेरेका छन् । यसरी बेलैमा विषय फेर्नेले बरु केही उन्नति गरेका छन् । एसईईमा ए प्लस र ए ल्याउने कतिपय विद्यार्थी ११–१२ को परीक्षामा फेलै भएका छन् । यस्तो कसरी हुन सक्छ ? यो कसको त्रुटि हो ? कि त हाम्रो एसईईको मापन ठीक भएन कि ११–१२ को ।
मान्छेको नापतौल र शारीरिक मोटाइ–दुब्लाइ तलमाथि भएजस्तै के प्रतिभा र क्षमता पनि एकाध वर्षमा तलमाथि हुन्छ ? दिमाग पनि घट्ने र बढ्ने क्रम भइरहन्छ ? नत्र एसईईमा उम्दा भनेर हामीले दिएको लब्धाङ्कपत्र किन एक वर्ष नपुग्दैमा गलत साबित हुन्छ ?
एसईई दिने उमेरको विद्यार्थीले अपवादबाहेक आफूलाई राम्ररी चिनिसकेकै हुँदैन । यो खाने, खेल्ने, उफ्रने उमेरै हो । एसईईको यही उमेरमा उसले समाजको चौतर्फी मार सहनुपर्छ । शिक्षकले आफूले जानेजति ज्ञान विद्यार्थीलाई कोच्याउन खोज्छ ।
विद्यालयले पनि सकेजति रणनीति अपनाएर विद्यार्थीलाई एकोहोरो बनाउँछ । अभिभावकले पनि ‘ल है यस पालि त एसईई’ भन्छ । विद्यार्थीचाहिँ एसईईपछि कहाँ के पढ्ने भन्ने अलमलमा हुन्छ । धेरै विद्यार्थी यही आम मानसिकताको सिकार हुन पुगेका छन्— ‘विज्ञान एक नम्बरको विषय हो । उम्दा नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले विज्ञान पढ्नैपर्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम २ जीपीएसहित विज्ञान र गणित जस्ता विषयमा सी प्लसभन्दा माथि ल्याउनेलाई विज्ञान पढ्ने अनुमति दिन्छ । अर्कातिर, न्यूनस्तरको ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको पनि त विज्ञान पढ्ने चाहना हुन सक्छ, तर अनेक मापदण्ड र नियम लगाएर तिनको चाहनामा अङ्कुश लगाइएको हुन्छ ।
पढ्न चाहनेले आफूलाई मन लागेको विषय पढ्न पाउनुपर्छ । एकातिर तिमी कमजोर छौ, तिमी सक्दैनौ भनेर २ जीपीए मुनिकालाई प्रक्रियामै सामेल नगराई बहिष्कार गरिन्छ, अर्कातिर ए प्लस र ए ल्याउनेलाई विज्ञानबाहेकका विषयमा भर्ना हुन पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा ‘मानविकी र शिक्षा जस्ता विषय कमजोरले पढ्ने हो’ भन्ने मानसिकतामा मलजल गरेको छ ।
शिक्षामा गरिएका पछिल्ला अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने, परीक्षा भनेको नितान्त प्राविधिक कुरा हो । परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सीप, प्रतिभा र क्षमताको पूर्ण रूपमा मापन गर्न सक्दैन । नम्बर या ग्रेड घट्नु भनेको दिमाग घट्नु होइन । कहिलेकाहीँ नम्बर तलमाथि हुँदा कोकोहोलो गर्नुको तुक छैन । धेरै नम्बर ल्याउने हीरा र थोरै नम्बर ल्याउने कीरा होइन ।
मानिसको दिमागलाई अङ्क या अक्षरले मापन गर्न सक्दैन । हामी भने राम्रो नम्बर ल्याउनेलाई बढी उचालिरहेका छौँ र अलिकति थोरै ल्याउनेलाई हतोत्साहित गरिरहेका छौँ । एउटै उदाहरण हेरौं, हाम्रो प्रणालीले ११–१२ मा विज्ञान–गणित नपढ्नेलाई पछि गएर मेडिकल, इन्जिनियरिङ र नर्सिङ पढ्ने ढोकै बन्द गरिदिन्छ ।
जबकि हाम्रोमा कक्षा ११–१२ मा विज्ञान–गणित नपढेका विद्यार्थीेले पनि विदेशका कतिपय शिक्षण संस्थामा नर्सिङ पढ्न पाउँछन् । बेवकुफ तिनीहरू हुन् कि हामी ? कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले चाहँदा–चाहँदै पनि राम्रो नम्बर ल्याउन सकेका हुँदैनन् । उसै पनि नौदेखि बाह्र कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेर तोकिसकिएको छ ।
एउटै तहको माथिल्लो कक्षामा जाने सवालमा किन विभेद गर्नु ? यो र त्योग्रेडका नाउँमा तिनीहरूलाई विषय तोकिदिएर एउटा सीमारेखामा किन बाँध्नु ? एकातिरए प्लस र ए को भारी बोकाएर केही विद्यार्थीलाई गाह्रा मानिएका विषय पढ्न बाध्य पार्नु,अर्कातिर तलका ग्रेड ल्याउनेलाई ठूला विषय पढ्ने चाहना हुँदा पनि रोक्नु त्यति राम्रो होइन कि ? कतै हामी धेरै अङ्क ल्याउने र नल्याउने दुवै थरी विद्यार्थीको सपना दुर्घटित बनाउँदै त छैनौँ ? यसतर्फ नेपाली शिक्षा जगत्ले पुनर्विचार गर्ने हो कि ?
प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:४७
नगरपालिकाको जोड सम्पदा र शिक्षामा
भक्तपुर — जिल्लाको तीन नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण, विकास निर्माण, शिक्षासहितका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । भक्तपुर र सूर्यविनायक नगरपालिकाले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र संस्कृति संरक्षणको क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ भने चाँगुनारायण नगरपालिकाले शिक्षा तथा नगरको आयस्रोतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सूर्यविनायक नगरपालिकाले विकास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेको छ । भक्तपुर नगर प्रमुख सुनील प्रजापतीले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हो ।
भक्तपुरले शिक्षा शीर्षकमा १६ वटा नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । आफू मातहत सञ्चालन हुँदै आएको ख्वप कलेज, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज सहित सात वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीको माग र समयको आवश्यकता अनुसार नयाँ विषयहरू थपिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक अगाडि बढाउन निरन्तर पहल गर्ने, जनज्योति पुस्तकालयलाई राष्ट्रियस्तरको पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्न ई–लाइब्रेरीको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखि ८ सम्म लागू गर्नेलगायतलाईप्राथमिकतामा राखेको छ ।
नगरपालिकाले सहुलियतमा पाँच लाखसम्म शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने योग्य र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा राखी पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्य थालनी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत विभिन्न विषयमा एमडी वा सो सरह स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये दुई जनालाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । छात्रवृत्ति पाउने चिकित्सकले भने भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गर्ने ख्वप अस्पतालमा कम्तीमा पाँच वर्ष पूर्णकालीन सेवा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
नगरपालिकाले क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया तथा मस्तिष्कघातजस्ता कडा रोग लागेका नगरवासीलाई नगरपालिकाका तर्फबाट प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले उपचार सहयोग रकम प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, खेलकुद, बजार अनुगमन, कृषि, पर्यटन, युवा तथा महिला लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, सडक तथा यातायात, भवन निर्माण, सिँचाइ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी सरसफाइ, संस्कृति प्रवर्द्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप तथा विपत् व्यवस्थापन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नगरपालिकाले वडा कार्यालयबाट राजमार्ग जोडिएको सडक, वडा कार्यालयबाट नगरपालिका जोड्ने सडक, प्रस्तावित भक्तपुर चक्रपथ सडक र पर्यटन पूर्वाधार सडकलाई मुख्य योजनामा राखेको छ । नगरक्षेत्रभित्र राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति तथा भवन निर्माण आचारसंहिताअनुसार आवास निर्माण गरी व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन, सामुदायिक भवन र सरकारी भवनमा वर्गीकरण गरी निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नगरक्षेत्रभित्र रहेका खुला क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गरिने र आवास तथा बस्ती विकासका लागि छुट्याइएका क्षेत्रहरूमा निजीक्षेत्र तथा नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू पहिचान गरी सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको नगरप्रमुख थापाले बताए । नगरपालिकाको स्वीकृतिबिना नगरक्षेत्रमा जग्गाजमिन सम्याउने, भू–संरचना बिगार्ने वा जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्य पूर्णरूपमा निधेष गरिने उनले बताए ।
त्यसैगरी, चाँगुनारायण नगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको स्तरवृद्धिका लागि २५ वर्षे सेवा अवधि पुगेका ५० वर्ष उमेर नाघेका शिक्षकले आगामी आर्थिक वर्ष साउन मसान्तभित्र स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा नगरका तर्फबाट प्रत्त्वियक्ति १ लाख रुपैयाँ थप उपदानको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौलाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि फ्रत्त्वियति १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने र चालू आर्थिक वर्षमा ८६ जनाले सुविधा प्राप्तगरिसकेको जनाएको छ ।
प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:४०
डा. अरुणा उप्रेती, डा. ज्योति भट्टराई